‘आर्या’ चलचित्रमा मानुङ डाडाको प्राकृतिक सौन्दर्य ! « Sajilokhabar
‘आर्या’ चलचित्रमा मानुङ डाडाको प्राकृतिक सौन्दर्य !
काठमाडौँ, ३ मंसिर । यतिबेला दमौलीको मानुङ डाडा आन्तरिक पर्यटनका दृस्टीले रातारात सुप्रसिद्ध भएको छ । त्यही मानुङ डाडाको मनोरम स्थानमा छायांकन भएको नेपाली कथानक चलचित्र “आर्या”को गीत अब ओ एस आर डिजिटल युटुब च्यानल मार्फत मंसिर १ गतेबाट हेर्न सकिन्छ ।
तिमिल्सिना फिल्म प्रडक्सनबाट निर्माण सप्पन्न भएको नेपाली कथानक चलचित्र”आर्या” मुलुकमा लकडाउनका कारण प्रदर्शनका लागि थाती रहेको थियोे । प्रसिद्ध गायिका मेलिना राइको सुमधुर स्वर रहेको रास्ट्रभावले ओतप्रोत यो गीतमा प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन ,सङ्गीतकार राम सिटाैलाको सङ्गीत, गीतकार लक्ष्मण सिटाैलाको शब्द रहेको छ भने यस चलचित्रलाई उपेन्द्र तिमिल्सिनाले निर्देशन गरेका छन् ।
नेपाली चलचित्रको इतिहासमा रा िस्ट्रय झन्डाको व्यापक प्रयोग गरि दृश्य छायांकन गरिएको सम्भवत यो नै पहिलो पटक हो। झन्डालाई नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मान र रास्ट्र गौरवको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण शन्देश दिने यो गीतले नेपालको आफ्नै गौरव गाथा बोलेको छ ।
गीतमा तनहुको मानुङ डाडाको मनोरम दृश्य बडाे रोचक ढंगले दृस्यान्कन गरिएको हेर्न पाइन्छ । मानुङको सम्पुर्ण प्राकृतिक सौन्दर्य कैद गरिएको यो गीतमा शिल्पा पोखरेल र अन्य नृत्य कलाकारहरुको बेजोड कलाकारिता देख्न सकिन्छ। यो गीतले अहिलेको बिश्व परिवेशमा रास्ट्रभक्ती ,स्वतन्त्रता ,नेपाल र नेपालको अभिभाज्य मन मुटु र झन्डाको महिमा अभिव्यक्त गरिएको छ । मानुङको प्राकृतिक सौन्दर्य र नेपालीको रास्ट्र प्रेम यहि शैल छायांमा घोलिएको यो गीतले सम्पुर्ण दर्शक श्रोताको मन जित्ने छ ।
विपिन र नम्रताको ‘प्रसाद’ युट्युबको शीर्ष स्थानमा (भिडियोसहित)
काठमाडौँ, ८ मंसिर । विपिन कार्की, निश्चल बस्नेत र नम्रता श्रेष्ठको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म
ड्रग्स प्रकरणमा पक्राउ परेकी भारतीलाई अदालत उपस्थित गराइँदै
काठमाडौं, ७ मंसिर । बलिउडमा ड्रग्स प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको भारतको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)ले कमेडियन
चर्चित कमेडियन भारती सिंह एनसीबीको नियन्त्रणमा
काठमाडौं, ६ मंसिर । नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)ले लागुऔषध प्रकरणमा चर्चित भारतीय कमेडियन भारती सिंह
रमेश र केकीको ‘माया लाउँ कि नलाउँ भो’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
झापा, ३० कात्तिक । झापाली सञ्चारकर्मी तथा मोडल रमेश तिवारी र नायिका केकी अधिकारी अभिनित